Shiinaha Lycra Teft Weft Knitted 8% Spandex 92% Polyamide Shiny RPET Jacquard Wrinkled Seersucker Stretch Swimsuit Fabric Manufacturer and Aladeji | Wenchang
Shayga Maya ： KW-1903
Waxyaabaha ： 8% Spandex 92% Polyamide
Dabeecad ： Maqaar-Saaxiibtinimo / Laab Laab La'aan / Dabacsanaanta /
Loo Isticmaalay: Dabaasha
SOO SAARKA SOO SAARKA Dharka dharka
Shayga MAYA KW-2182
Waxyaabaha 92% Nylon 8% Spandex
Seersucker waa daabac suuf leh xumbo iyo crepe. Waxaa jira noocyo badan oo ah biliij, midab caadi ah, daabacaad iyo midabyo midabkeedu yar yahay. Waa neefsasho iyo raaxo leh in la xidho. Uma baahnid in la feero ka dib marka la dhaqo. Waxay ku habboon tahay dharka carruurta, jaakadaha, goonnada, jiifka, iwm. Seersucker oo leh tiro dun dheeri ah ayaa loo isticmaali karaa inay ku fidsan yihiin sariiraha, daahyada, iwm. Xumbayntu waa adeegsiga fiiloyin isballaaranaya oo yaraanaya marka ay soo gaadhayaan alkali urursan. Seersucker oo lagu helay adoo si toos ah ugu daabacaya alkali maro cudbi ah waxaa loo yaqaan alkali seersucker, oo sidoo kale loo yaqaan seersucker dhaqameed; seersucker waxaa qayb ahaan lagu daabacay cusbada ka hortagga dheeha ee dharka cudbiga ah, seersucker-ka ay soo saarto liinta ayaa si buuxda loo duubay. Ereyga loo adeegsado daabacaadda iyo warshadaynta dheehgu waa seerser seer.
Laba dogob oo kala duwan oo dunsan oo kala duwan, dunta fidsan iyo xoqida buunbuuninta, ayaa loo isticmaalaa tolidda. Dunta xumbayntu waxay leedahay tirinta dunta ka sii dhumuc weyn iyo xawaaraha sii-deynta duufaanka oo qiyaastii 30% ka dhakhso badan kuwa ka soo baxa dhulka. Sidaa darteed, jirka maradu wuxuu sameysmaa goobooyin iskudhaf ah oo xambaarsan marka uu tolmo maro cawlan. Kadib dabacsanaan dabacsan, waxay noqoneysaa shaashad tolmo leh. Qalabka wax lagu arko ee loo yaqaan 'seersucker' oo lagu soo saaray habkan guud ahaan wuxuu ka samaysan yahay waxyaabaha midabkiisu yahay midabka midabkiisu yar yahay, oo ay ku jiraan dhammaan suufka, faybar la sifeeyey ama isku-darka faybar kiimikada ah.
Tusaale ahaan, dunta fidsan ama dunta weft ee u dhexeysa polyesterka iyo cudbiga waa la tolay oo lagu daaweeyaa sodium hydroxide solution. Maaddaama fiber-ka cudbigu ka sii yaraanayo wax ka badan fiber-ka polyesterka ah, jidhka maryaha ah ayaa sameysmi doona goobooyin xasaasi ah tusaale kale waa adeegsiga polyester yaraanshaha sare iyo polyester caadi ah oo ku jira dunta. Dharka waxaa lagu tolay xariijimo isku dhejisan oo loo habeeyay jihada weft ama jihada weft. Ka dib daaweynta kuleylka, jirka dharka ayaa sameeya goobooyin isku-dhafan oo isku xiran sababtoo ah heerarka yareynta kuleylka ee labada fiilooyin.
Qalabka ceeriin ee seersucker-ka wuxuu ka sameysan yahay cudbi saafi ah ama caag / polyester / cudbi, oo cufnaanta xargaha xumbadu way ka sarreysaa tan dhulka, ama xajmiga xumbadu waxay ka samaysan yihiin xargo iyo dhulku wuxuu ka samaysan yahay dun yar. Markaad tolaneyso, mugga sii deynta ee xumbada xumbadu way ka weyn tahay tan dhulka, ka dibna dunta unuggu waa la midabeeyaa oo si dabacsan ayaa looga shaqeeyaa si loo sameeyo xumbo qurux badan oo aan sinnayn Isticmaal mabda'a ah in fiber-ka cudbigu lakulmo lye xoog leh si loo kordhiyo dhexroorka oo loo gaabiyo dhererka.
Seersucker waa maro cudbi ah oo leh muuqaal gaar ah iyo astaamo qaab, kaas oo laga sameeyay muslin dhuuban. Dusha sare ee maradu waxay soo bandhigeysaa goobooyin yaryar oo isku mid ah iyo sinnaan la'aan cufan, oo aan u dhowayn jirka markii la xidhayo, oo leh dareen qabow. Waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada dharka xagaaga ee haweenka. Faa'iidada dharka ka sameysan aaladda wax lagu arko ayaa ah in aysan u baahnayn in bir la suro ka dib marka la maydho, laakiin cillad darrada jirta ayaa ah in goobooyinku ay si tartiib tartiib ah u siman yihiin ka dib xoqidda soo noqnoqda. Gaar ahaan marka la dhaqo, laguma talin karo inaad u isticmaasho biyo kulul si aad u qoyso, ama inaad xoqdo oo aad u rogrogto si xoog leh, si aysan u saameynin soonka xumbada.
Hore: Dharka jilicsan ee Polyester RPET Pet Mesh Milky Jersey Dharka laga sameeyay Dhalooyinka caaga ah ee dib loo warshadeeyay
Xiga: RPET dhidid 87% polyamide 13% spandex Lycra Cotton Dareen Jacquard Custom 4 Way Stretch Daabacaadda Dib-u-warshadaynta Dharka Dharka
Dharka dabbaasha Jacquard ， Dharka dharka dabbaasha ee Seersucker ， dharka polyamide